Global Voices teny Malagasy » Ny fandrisihana lehibe ho ahy handika ho an’ny GV · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jolay 2019 4:55 GMT 1	 · Mpanoratra Christian Bwaya Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, fandikàna-voalohany
Andro ‘namirapiratan'ny fanoratana bilaogy’ tao Tanzania tamin'ireny andro ireny. Ndesanjo Macha izay mpiandraikitra tsanganana isankerinandro tao aminà gazety iray tao an-toerana no nitarika ny hetsika. Nisy fiantraikany tamin'ny fomba fihevitro amin'ny naha-mpianatra ahy ireo fampisaintsainana nataony isankerinandro momba ny kolontsaina sy ny politika afrikàna. Tsy maintsy manaiky aho fa izay fiantraikany izay no nandrisika ahy hanomboka ny bialogiko Swahili  manokana tamin'ny 2005.
Araka izany dia hitako ho mahaliana indrindra ny tetikasa Lingua ary noheveriko ho fahafahana iray handraisako anjara hampiroborobo ny fiteny Swahili. Ny fandikana voalohany nataoko  dia navoaka tamin'ny 25 May 2009, avy amin'ny lahatsoratra nosoratan'i Amira Al Hussaini. Mbola tsaroako hatrany ny fientanentanako sy ny fahatretrehako.
Tsy hoe nandeha ho azy ny zavatra rehetra tany am-piandohana. Tsy nanana fototra nifaharana aho raha momba ny fiteny sy ny asa fanaovana gazety. Ny kolontsaina tsara indrindra fantatro dia ny ahy manokana. Tena fanamby ny fahatakarana ny fahamaroana kolontsaina misisika any anatin'ireo tanisa sasany niaingàna, ary nosoratana tanaty vanimpotoana tena samihafa tanteraka. Nila fotoana elaela aho vao afaka nipetraka tanatin'ny zavanisy. Tsaroako io zavatra niainana io fony aho nandika lahatsoratra iray nanasongadina ilay adihevitr'ireo mpankafy baolina kitra momba ny hanakànana na tsia ny Vuvuzelas  mandritra ny Fiadiana Tompondaka Erantany 2010 tao Afrika Atsimo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/23/141629/
 bialogiko Swahili: http://bwaya.blogspot.com
 fandikana voalohany nataoko: https://sw.globalvoicesonline.org/2009/05/saudi-arabia-je-mafua-ya-nguruwe-yatatishia-hija/